"ရုပ်ရှင်တွေကနေ တစ်ဆင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနည်းများ"
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေ သူတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့ အခါ သင်တန်းတွေပဲတက်ပြီး လေ့လာတာမျိုးကြီးပဲ လုပ်နေလို့ မရပါဘူး။
ကိုယ့်ဘက်ကလဲ အားတဲ့အချိန်တွေမှာ လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိဘာသာ လေ့ကျင့်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက မှ ရုပ်ရှင်တွေ ကိုနေတဆင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
>>> အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီး native speaker တွေရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနည်းလမ်းတွေကိုသင်ယူပါ။ အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေနားထောင်ခြင်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ အသံထွက်တွေ၊ volcabulary အသုံနှုန်းတွေအတွက် များစွားအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
>>> နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘာသာစကားယဉ်းကျေးမှုတွေကို နားလည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် သင်ဟာ အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခု ကို ကျောင်းကိစ္စနဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ အလည်အပတ်နဲ့ သော်လည်းကောင်း သွားဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ရုပ်ရှင်တွေကနေတစ်ဆင့် အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာလို့ ရပါတယ်။
>>> သင်ဟာတကယ်လို့ စာအုပ်တွေနဲ့လေ့လာရတာကိုငြီးငွေ့ လာတဲ့ အခါ ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးလေ့လာနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လူကိုမငြီးငွေ့ စေဘူးပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆို ပို လို့ တောင်အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ တစ်ချက်ခုတ် ၃ ချက်လောက်ပြတ်ပါတယ်။ ကိုဝါသနာပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာလည်းလေ့လာလို့ ရမယ်၊ ဝါသနာနဲ့ တွဲပြီးလေ့လာတဲ့အတွက် သင်ယူလေ့လာမှုကို ပိုပြီးလွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ်။
>>> နောက်တစ်ခုက ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီး လေ့လာတဲ့ အခါ... သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပါးစပ်လှုပ်ပုံကိုသေချာကြည့်ပြီးလေ့လာပါ။ အဲ့ဒီလို လေ့လာခြင်းက အချို့သောစကားလုံးများနှင့်ဝါကျများကိုမည်သို့အသံထွက်ရမည်နှင့်အချို့သောအသုံးအနှုန်းများနှင့်
ရုပ်ရှင်တွေကနေတစ်ဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ...?
၁. ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရွေးပါ
ဥပမာ beginner ဆိုရင် ကာတွန်းကားတွေကို ရွေးပါ။ အဓိကကတော့ ကာတွန်းကားတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာက နားလည်လွယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလို့ပါပဲ။
၂. စိတ်ဝင်စားစရာ ရုပ်ရှင်ကို ရွေးပါ
ပျင်းစရာရုပ်ရှင်ကို ကြည့်မိရင် ပျင်းလာပြီး အာရုံမစိုက်မိတော့ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေကို အကြိုသုံးသပ်တဲ့ Rotten Tomatoes ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရှိပြီး အဲဒီအထဲကနေ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို မကြည့်ခင် အကဲခတ်လို့ ရပါတယ်။
မသိတဲ့စကားလုံးတွေ့ရင် ကြည့်ပါ။ အဲဒီစကားလုံးကြောင့် ကိုယ် အခက်တွေ့ရတဲ့အတွက် အဲဒီစကားလုံးကို အကြာကြီး မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။
၄. ၀ါကျတိုလေးတွေကို လိုက်ဆိုကြည့်ပါ
တစ်ခါတလေ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တချို့ဝါကျတွေကို မကြာမကြာ ကြားရပါတယ်။ ဥပမာ “hell yeah!” တို့၊ “sure thing” တို့ “you betcha!” ပါ။ ဒါတွေက အင်္ဂလိပ်စကားမှာ အသုံးများတယ်။
ဒါတွေကို လိုက်ဆိုကြည့်ခြင်းဖြင့် မှတ်မိနေစေပါတယ်။
၅. စာတန်းထိုး မပါနဲ့
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တစ်ကားကို စာတန်းထိုး မပါဘဲကြည့်ရတာ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အကြံပြုချင်တာက ပထမတစ်ခေါက်မှာ စာတန်းထိုးကြည့်ပါ။
ဒုတိယတစ်ကြိမ် ကြည့်ရင် စာတန်းမထိုးဘဲ ကြည့်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ပထမတစ်ကြိမ်မှာ ဇာတ်လမ်းကိုသိမယ်။
ပြီးတော့ ပထမတစ်ကြိမ်က မသိတဲ့ စကားလုံးတွေကို အဘိဓာန်ထဲမှာ ရှာဖွေခွင့်ရမယ်။
၆. VLC player နဲ့ကြည့်ပါ
ကွန်ပျူတာမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်လေ့ရှိသူတွေအတွက်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရုံအပြင် သူ့မှာ ထူးခြားတဲ့ feature ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်သလို အနှေးအမြန်နှုန်းနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ အပိုင်းမှာ အနှေးပြကွက်နဲ့ကြည့်ရင်း ကိုယ့်အကြားစွမ်းရည်ကို လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
၇. စကားလုံးတချို့ လွတ်သွားတာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး
ရုပ်ရှင်ကြည့်တာက အပန်းဖြေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ တချို့စကားလုံးတွေကို သိသွားတယ်ဆိုရင် အမြတ်ပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရမယ် ဇာတ်ကားလေး တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်..
အဲ့ဒါကတော့ Landon Sweeties ပါ..
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၉ တုန်းက ထွက်ရှိထားတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ထိုင်းကနေLandon ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်သွားတဲ့ ထိုင်းကောင်မလေး တစ်ယောက်ကြောင်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ထားတာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ပဲ လန်ဒန်ရောက်သွားတဲ့အတွက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကကို ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇတ်ကားမှာ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စာကြောင်းဖွဲ့ စည်းပုံတွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
"ရုပျရှငျတှကေနေ တဈဆငျ့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာနညျးမြား"
အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာနေ သူတှအေနနေဲ့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာတဲ့ အခါ သငျတနျးတှပေဲတကျပွီး လလေ့ာတာမြိုးကွီးပဲ လုပျနလေို့မရပါဘူး။
ကိုယျ့ဘကျကလဲ အားတဲ့အခြိနျတှမှော လကေ့ငျြ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မိမိဘာသာ လကေ့ငျြ့ပွီး အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာနညျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲက မှ ရုပျရှငျတှေ ကိုနတေဆငျ့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာပါလို့အကွံပွုခငျြပါတယျ။
>>> အင်ျဂလိပျရုပျရှငျတှကေိုကွညျ့ပွီး native speaker တှရေဲ့ ပွောပုံဆိုပုံနညျးလမျးတှကေိုသငျယူပါ။ အင်ျဂလိပျရုပျရှငျကွညျ့ခွငျး၊ အင်ျဂလိပျသီခငျြးတှနေားထောငျခွငျးက အင်ျဂလိပျဘာသာစကားရဲ့အသံထှကျတှေ၊ volcabulary အသုံနှုနျးတှအေတှကျ မြားစှားအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
>>> နိုငျငံခွားရုပျရှငျတှကွေညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ဘာသာစကားယဉျးကြေးမှုတှကေို နားလညျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါအပွငျ သငျဟာ အခွားတိုငျးပွညျတဈခုခု ကို ကောငျြးကိစ်စနဲ့သျောလညျးကောငျး၊ အလုပျကိစ်စနဲ့သျောလညျးကောငျး၊ အလညျအပတျနဲ့သျောလညျးကောငျး သှားဖို့အစီစဉျရှိတယျဆိုရငျလညျး ရုပျရှငျတှကေနတေဈဆငျ့ အဲ့ဒီနိုငျငံရဲ့ဘာသာစကားယဉျကြေးမှုတှကေိုလလေ့ာလို့ရပါတယျ။
>>> သငျဟာတကယျလို့စာအုပျတှနေဲ့ လလေ့ာရတာကိုငွီးငှလေ့ာတဲ့ အခါ ရုပျရှငျတှကေိုကွညျ့ပွီးလလေ့ာနိုငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ရုပျရှငျတှဟော ဖြျောဖွမှေုတဈခုဖွဈတယျ။ ဖြျောဖွမှေုတဈခုဖွဈတဲ့ အတှကျ သငျ့ရဲ့စိတျကိုပြျောရှငျစတေယျ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ လူကိုမငွီးငှစေ့ဘေူးပေါ့ဗြာ။ ရုပျရှငျကွညျ့တာ ဝါသနာပါတဲ့လူတှဆေို ပို လို့တောငျအဆငျပွပေါသေးတယျ။ တဈခကျြခုတျ ၃ ခကျြလောကျပွတျပါတယျ။ ကိုဝါသနာပါတဲ့ ရုပျရှငျတှကေိုလညျးကွညျ့ရမယျ၊ အင်ျဂလိပျစာလညျးလလေ့ာလို့ရမယျ၊ ဝါသနာနဲ့တှဲပွီးလလေ့ာတဲ့အတှကျ သငျယူလလေ့ာမှုကို ပိုပွီးလှယျကူမွနျဆနျစမေယျ။
>>> နောကျတဈခုက ရုပျရှငျတှကွေညျ့ပွီး လလေ့ာတဲ့ အခါ... သရုပျဆောငျတှရေဲ့ပါးစပျလှုပျပုံကိုသခြောကွညျ့ပွီးလလေ့ာပါ။ အဲ့ဒီလို လလေ့ာခွငျးက အခြို့သောစကားလုံးမြားနှငျ့ဝါကမြားကိုမညျသို့အသံထှကျရမညျနှငျ့အခြို့သောအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့
ရုပျရှငျတှကေနတေဈဆငျ့ အင်ျဂလိပျစာ ဘယျလိုလလေ့ာမလဲ...?
၁. ကိုယျ့ရဲ့လကျရှိ အင်ျဂလိပျစာအဆငျ့နဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ရုပျရှငျကို ရှေးပါ
ဥပမာ beginner ဆိုရငျ ကာတှနျးကားတှကေို ရှေးပါ။ အဓိကကတော့ ကာတှနျးကားတှမှော အင်ျဂလိပျစာက နားလညျလှယျပွီး စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလို့ပါပဲ။
၂. စိတျဝငျစားစရာ ရုပျရှငျကို ရှေးပါ
ပငျြးစရာရုပျရှငျကို ကွညျ့မိရငျ ပငျြးလာပွီး အာရုံမစိုကျမိတော့ပါဘူး။ ရုပျရှငျတှကေို အကွိုသုံးသပျတဲ့ Rotten Tomatoes ဆိုတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျရှိပွီး အဲဒီအထဲကနေ ရုပျရှငျတဈကားကို မကွညျ့ခငျ အကဲခတျလို့ ရပါတယျ။
မသိတဲ့စကားလုံးတှရေ့ငျ ကွညျ့ပါ။ အဲဒီစကားလုံးကွောငျ့ ကိုယျ အခကျတှရေ့တဲ့အတှကျ အဲဒီစကားလုံးကို အကွာကွီး မှတျမိနပေါလိမျ့မယျ။
၄. ဝါကတြိုလေးတှကေို လိုကျဆိုကွညျ့ပါ
တဈခါတလေ ရုပျရှငျထဲမှာ တခြို့ဝါကတြှကေို မကွာမကွာ ကွားရပါတယျ။ ဥပမာ “hell yeah!” တို့၊ “sure thing” တို့ “you betcha!” ပါ။ ဒါတှကေ အင်ျဂလိပျစကားမှာ အသုံးမြားတယျ။
ဒါတှကေို လိုကျဆိုကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ မှတျမိနစေပေါတယျ။
၅. စာတနျးထိုး မပါနဲ့
နိုငျငံခွားရုပျရှငျတဈကားကို စာတနျးထိုး မပါဘဲကွညျ့ရတာ ခကျပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ အကွံပွုခငျြတာက ပထမတဈခေါကျမှာ စာတနျးထိုးကွညျ့ပါ။
ဒုတိယတဈကွိမျ ကွညျ့ရငျ စာတနျးမထိုးဘဲ ကွညျ့ပါ။ ဒီနညျးနဲ့ ပထမတဈကွိမျမှာ ဇာတျလမျးကိုသိမယျ။
ပွီးတော့ ပထမတဈကွိမျက မသိတဲ့ စကားလုံးတှကေို အဘိဓာနျထဲမှာ ရှာဖှခှေငျ့ရမယျ။
၆. VLC player နဲ့ကွညျ့ပါ
ကှနျပြူတာမှာ ရုပျရှငျကွညျ့လရှေိ့သူတှအေတှကျပါ။ ရုပျရှငျကွညျ့ရုံအပွငျ သူ့မှာ ထူးခွားတဲ့ feature ပါဝငျပါတယျ။
အဲဒါကတော့ ရုပျရှငျတှကေို ကွိုကျသလို အနှေးအမွနျနှုနျးနဲ့ ကွညျ့ရှုနိုငျခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျနားမလညျတဲ့ အပိုငျးမှာ အနှေးပွကှကျနဲ့ကွညျ့ရငျး ကိုယျ့အကွားစှမျးရညျကို လကေ့ငျြ့နိုငျပါတယျ။
၇. စကားလုံးတခြို့ လှတျသှားတာ ဘာမှမဖွဈပါဘူး
ရုပျရှငျကွညျ့တာက အပနျးဖွဖေို့ရညျရှယျပွီး အဲဒီအထဲမှာ တခြို့စကားလုံးတှကေို သိသှားတယျဆိုရငျ အမွတျပါပဲ။
အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာလို့ရမယျ ဇာတျကားလေး တဈခုကိုပွောပွခငျြပါတယျ..
အဲ့ဒါကတော့ Landon Sweeties ပါ..
ဒီဇာတျကားကတော့ ၂၀၁၉ တုနျးက ထှကျရှိထားတာပါ။ ဒီဇာတျကားမှာ ထိုငျးကနေLandon ကိုအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရောကျသှားတဲ့ ထိုငျးကောငျမလေး တဈယောကျကွောငျးကို အခွခေံပွီးရိုကျထားတာပါ။ အင်ျဂလိပျစကားမပွောတတျပဲ လနျဒနျရောကျသှားတဲ့အတှကျ ကွုံတှရေ့တဲ့ အခကျအခဲလေးတှကေကို ဟာသဆနျဆနျရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီဇတျကားမှာ အခွခေံအင်ျဂလိပျစကားပွောနဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့ စာကွောငျးဖှဲ့ စညျးပုံတှကေို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာဖို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
သငျ့ကလေးသင်ျခြာစှမျးရညျမွငျ့မားလာစရေနျ ဒီ game လေးတှဆေော့ရငျးလကေ့ငျြးလိုကျရအောငျ